Yuu madaxweyne Xasan u rabaa madaxweynaha maamulka Gobollada Dhexe? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka shaki qaba in madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud uu dedaal ugu jiro sidii uu Maamulka loo dhisayo Mudug iyo Galgaduud uu madaxweyne uga noqon lahaa wasiirkii hore ee Aminiga Gudaha ee fashilmay C/kariim Xuseen Guuuled, kaasoo shalay ka mid ah wafdigii madaxweynaha u raacay socdaalkii Dhuusamareeb.
Gudoomiyaha Saddexda Gole ee Ahlu Sunna WalJamaaca, Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye, ayaa cadeeyay inay ka soo horjeedaan in xubno laga keenay Madaxtooyada Soomaaliya, ay Madaxweyne ka noqdaan Gobolada Dhexe.
“Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu wataa C/kariin Xuseen Guuleed, C/kariina Gobalada Dhexe madaxweyne kama noqonaaya.” ayuu yiri Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye.
“Madaxweyne Xasan Sheekh kuma qancin doono shacabka Gobalada dhexe, Cabdi kariin baan Madaxweyne idiin kaga dhigayaa, kama gadmi doonto, haddii taasi dhacdo waxey kordhin doontaa dhibaato iyo in sidii uu dowladda dhexe uga shaqeyn waayo uu tanna uga shaqeyn waayo” ayuu sidoo kale yiri Sheekh Guureeye.
Shalay markii uu madaxweyne Xasan booqasho ku tegay magaalada Dhuusamareeb oo uu ka duray shirka dib u heshiisiinta beelaha gobollada Dhexe ayaa garba fadhiyey C/kariim Xuseen Guuleed oo horay ugu fashilmay wasaaradda Amniga Gudaha iyo C/raxmaan Odawaa oo ahaa madaxii Jamacadda SIDAD, kaasoo dhawaan loo magacaabay wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Labadan nin ayaa la sheegaa iney ka mid yihiin kooxda Dam Jadiid ee majaraha u haya dowladda Soomaaliya, waxeyna kasoo jeedaan Gobollada Dhexe.
Wasiir ku xigeen ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo lagu xiray Itoobiya